Indlu yesimanjemanje, ethokomele engu-3 eliseceleni kwechibi - I-Airbnb
Indlu yesimanjemanje, ethokomele engu-3 eliseceleni kwechibi
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Kevin
Itholakala enhliziyweni yeLitchfield County, leli khaya lesimanjemanje lesitayela saseCape Cod linikeza indawo ekahle yokubalekela yasemakhaya.
Ubheke ichibi elinokuthula, eligcwele ama-lilypad nezilwane zasendle, uzoba namahektha angu-2 omhlaba oyisicaba ongawuhlola.
Indawo emaphakathi, uzoba umgwaqo omfushane ukusuka emadolobheni ahamba phambili e-Litchfield County, okuhlanganisa: Bantam (5min), Washington Depot (8min), Litchfield (10min), kanye ne-New Preston (13min).
Hlala lapha uma uthanda ukugibela intaba, ibhayisikili, isikebhe, ukubhukuda, noma ukupheka futhi uphumule!
Ikotishi lezwe elivuselelwe, lesimanjemanje, leli gumbi lokulala le-3, ikhaya lokugezela le-2.5 linikeza ithuba elihle lokuphumula nokufaka kabusha endaweni enhle phakathi kwamagquma e-Litchfield County, Connecticut.
Ikhishi le-Gourmet lifaka uhhavini we-Wolf / uhla, i-hood yezimboni, izinto zensimbi ezingenasici (kufaka phakathi umshini wokuwasha izitsha), kanye nesikhala esanele sokuthi upheke / ubhake ngesifiso senhliziyo yakho!
Phansi kwephasishi elizimele ngaphandle kwekhishi kukhona igumbi lokulala le-en suite Master futhi lifaka nekhabethe elikhulu lokungena. Phezulu, kunamagumbi okulala amakhulu angu-2 anendlu yokugezela egcwele eyabelwe phakathi.
Ngaphezu kwegumbi lokudlela elibanzi, isitezi sokuqala sinikeza izindawo zokuhlala ezintathu: umhume othokomele, indawo yokugezela esimemayo enendawo yomlilo evuthayo, kanye negumbi elikhulu + lomtapo wolwazi.
Isitezi esingaqediwe, esiphuma ngaphandle, sihlanganisa indawo yokuzivocavoca encane ene-Peloton Bike+, umshini wokugwedla i-Concept2, ibhentshi + ama-dumbbells, nomata be-yoga.
I-HDTV engu-55" ene- I-Amazon Prime Video, Apple TV, I-Chromecast, Fire TV, I-HBO Max, Hulu, I-Netflix
Ngizohlala ngitholakala ngocingo/ngombhalo, kodwa ngeke ngibe seduze ukuze ngize mathupha. Uma kukhona okudingayo, nginomphathi wendawo ozokwazi ukudlula (kulinde ukutholakala kwakhe).